‘Ezi Zinto Zidlulisele Kubantu Abathembekileyo’—2Timoti 2:2 | Efundwayo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseSlovakia Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBolivia Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseBritani Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseFransi Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseRomaniya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMbunda IsiMingrelian IsiMongolia IsiMoore IsiMotu IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
‘Ezi zinto, zidlulisele kubantu abathembekileyo, abakufanelekeleyo ukufundisa abanye.’—2 TIM. 2:2.
Wenza ntoni uKumkani uDavide xa waxelelwa ukuba itempile kaThixo yayiza kwakhiwa ngunyana wakhe?
Kutheni abazalwana abaneembopheleleko befanele bancede abazalwana abangaphantsi kubo ngeminyaka ukuba bakwazi ukuthwala iimbopheleleko ezingakumbi?
Abazalwana abasafuna ukuqeqeshwa banokuba nayo njani imbono efanelekileyo xa besenza umsebenzi obusenziwa ngabaphambi kwabo?
1, 2. Abantu abaninzi bawujonga njani umsebenzi wabo?
UMNTU udla ngokwaziwa ngomsebenzi awenzayo. Kubantu abaninzi, ngumsebenzi okanye sisikhundla abanaso esibenza bazive bebalulekile. Kwezinye iindawo kuqhelekile ukuba xa abantu beqala ukubonana, umbuzo wokuqala ibe ngulo, “Wenza ntoni emsebenzini wakho?”
2 Ngamanye amaxesha, iBhayibhile xa ichaza umntu iye ichaze nokuba wawuyintoni umsebenzi wakhe. Isichazela ‘ngoMateyu umqokeleli werhafu’; ‘uSimon umsuki’; “noLuka ugqirha oyintanda.” (Mat. 10:3; IZe. 10:6; Kol. 4:14) Ikwachaza abantu ngokusixelela ngezabelo zabo ekukhonzeni uThixo. Sifunda ngoKumkani uDavide, umprofeti uEliya nompostile uPawulos. La madoda ayezixabisa izabelo zawo azinikwe nguThixo. Ukuba nathi sinamalungelo athile enkonzo, sifanele siwaxabise.
3. Kutheni kufuneka abantu abadala baqeqeshe abo bangaphantsi kubo ngeminyaka? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
3 Abaninzi kuthi bayawuthanda umsebenzi wabo, ibe bebengavuya ukuba bebenokuwenza oko. Okubuhlungu kukuba, ukususela kuAdam, isizukulwana ngasinye besisaluphala kuze kulandele esinye. (INtshu. 1:4) Kutshanje, le nto yenze izinto zanzinyana kumaKristu enene. Umsebenzi wabantu bakaYehova uye wanda waza wanzima. Njengoko sisenza imisebenzi engazange yenziwe ngaphambili, kuye kwafuneka kusetyenziswe iindlela ezintsha, kwaye kumaxesha amaninzi kusetyenziswe ubugcisa bale mihla obutshintsha umhla nezolo. Abanye abantu abadala bayanzinyelwa kukubusebenzisa. (Luka 5:39) Kwanaxa bekwazi, basenokungabi nawo amandla alingana nawabantu abangaphantsi kubo ngeminyaka. (IMize. 20:29) Ngoko, abantu abadala, kuba bebathanda abo bangaphantsi kubo ngeminyaka, kulindeleke ukuba babaqeqeshe ukuze bakwazi ukuthwala iimbopheleleko ezingakumbi.—Funda iNdumiso 71:18.
4. Kutheni kunzima ukunika abanye abantu igunya? (Jonga ibhokisi ethi “ Kutheni Kunzima Kwabanye Abantu Ukunikisa Ngegunya?”)
4 Kusenokuba nzima kwabo baneembopheleleko ukubanika igunya nabo bangaphantsi kubo ngeminyaka. Abanye sukube besoyika ukuthathelwa isikhundla abasithanda kunene. Abanye banexhala lokuba bengazukwazi ukujonga yonke into yaye becinga ukuba, ukuba ingaba ngabo bangaphantsi kubo ngeminyaka ababambe iintambo, izinto ziza konakala. Abanye basenokuthi abanalo ixesha lokuqeqesha omnye umntu. Kwelinye icala, nabo bafuna ukuqeqeshwa bafanele balinde xa bengade banikwe umsebenzi ongakumbi.
5. Yeyiphi imibuzo eza kuphendulwa kweli nqaku?
5 Makhe siwujonge kumacala omabini lo mba wokunikisa ngegunya. Okokuqala, abo baneembopheleleko banokubanceda njani abo bangaphantsi kubo ngeminyaka ukuba bathwale iimbopheleleko ezingakumbi, kwaye kutheni ibalulekile loo nto? (2 Tim. 2:2) Okwesibini, kutheni kubalulekile ukuba abo basafuna ukuqeqeshwa babe nembono efanelekileyo xa bencedisa abazalwana abanamava kunabo baze bafunde kubo? Masiqale sibone ukuba uKumkani uDavide wamnceda njani unyana wakhe ukuze athwale imbopheleleko ebalulekileyo.
UDAVIDE WAMQEQESHA WAZA WAMXHASA USOLOMON
6. UKumkani uDavide wayefuna ukwenza ntoni, kodwa wathini uYehova?
6 Emva kokuba yimbacu iminyaka, uDavide waba ngukumkani waza wahlala kamnandi endlwini yakhe. Ehlutshwa yinto yokuba kwakungekho “ndlu” okanye tempile enikelwe kuYehova, wafuna ukuyakha. Ngoko wathi kumprofeti uNatan: “Yabona, ndihlala endlwini yomsedare, kodwa ityeya yomnqophiso kaYehova iphantsi kwamalaphu entente.” UNatan wamphendula wathi: “Yonk’ into esentliziyweni yakho yenze, kuba uThixo . . . unawe.” Kodwa uYehova yena wathi makwenziwe ngenye indlela. Wathi uNatan makathi kuDavide: “Asinguwe oya kundakhela indlu yokuhlala.” Nangona uYehova wamqinisekisa uDavide ukuba uya kuqhubeka emsikelela, wathi itempile iza kwakhiwa ngunyana wakhe, uSolomon. Wenza ntoni ke uDavide?—1 Kron. 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.
7. UDavide wenza ntoni akuva umyalelo kaYehova?
7 UDavide wawuxhasa umsebenzi wokwakha itempile, zange abe ecinga into yokuba akuzuconywa yena xa sele ugqityiwe. Nyhani ke, eso sakhiwo saziwa ngokuba yitempile kaSolomon, kungekhona ekaDavide. Nangona kusenokwenzeka ukuba intliziyo yakhe yayilihlwili kuba engayi kuwufeza umnqweno wakhe wokwakha itempile, wawuxhasa ngokupheleleyo umsebenzi. Walungiselela amaqela awayeza kusebenza ukuze aqokelele iintsimbi, ubhedu, isilivere negolide kunye namaplanga omsedare. Wakhuthaza noSolomon wathi: “Ke kaloku, nyana wam, ngamana uYehova angaba nawe, uze uphumelele uyakhe indlu kaYehova uThixo wakho, kanye njengoko wathethayo ngawe.”—1 Kron. 22:11, 14-16.
8. Kutheni uDavide wayenokuthi uSolomon wayengafaneleki ukwakha itempile, kodwa wenza ntoni?
8 Funda eyoku-1 yeziKronike 22:5. UDavide ngewayethe uSolomon akafanelekanga ukuba liliso kumsebenzi obaluleke ngolo hlobo. Le tempile kwakufuneka ibe “nobungangamela ngokugqwesileyo” wabe uSolomon ngelo xesha ‘eselula yaye ebuthathaka.’ Kodwa uDavide wayesazi ukuba uYehova wayeza kumnceda uSolomon akwazi ukuwenza loo msebenzi. Ngoko uDavide wahoya izinto anokuncedisa ngazo njengokuqokelela impahla yokwakha ibe ninzi.
VUYISWA KUKUQEQESHA ABANYE ABANTU
Kuyavuyisa ukubona abafana bethwala iimbopheleleko ezingakumbi (Jonga isiqendu 9)
9. Abazalwana abaneembopheleleko banokuvuyiswa yintoni xa beyekela izabelo zabo kwabanye abazalwana? Zekelisa.
9 Abazalwana abaneembopheleleko abafanele badimazeke xa kufuneka bayekele izabelo zabo kubazalwana abangaphantsi kubo ngeminyaka. Kunoko, ukubaqeqesha abo bazalwana ukuze bathwale iimbopheleleko kuya kunceda ukuze umsebenzi uqhubeke. Abazalwana abaneembopheleleko bamele bancume bodwa xa bebona umzalwana abamqeqeshileyo esenza umsebenzi. Masithi utata othile ufundisa unyana wakhe ukuqhuba. Ngoxa eseyinkwenkwana, ebembukela uyise xa eqhuba. Xa sele emdadlana, uyise uyamcacisela ukuba kuqhutywa njani. Xa efike kubudala obusemthethweni bokuqhuba, uyaqalisa ukuqhuba njengoko uyise emxelela ukuba enze ntoni. Ekuqaleni basenokuncedisana ukuqhuba kodwa ekuhambeni kwexesha iba ngunyana oqhuba ixesha elininzi okanye ibe nguye oqhubela uyise owalupheleyo. Lo tata unobulumko uyavuya kuba ingunyana wakhe oqhubayo ngoku, ibe akaziva engento yanto. Ngokufanayo, abazalwana abaneembopheleleko bayazidla xa abazalwana ababaqeqeshileyo bethwala iimbopheleleko zebandla.
10. UMoses wayevakalelwa njani ngegunya nangokuzukiswa?
10 Thina bazalwana abaneembopheleleko kufuneka sikulumkele ukuba nomona. Jonga ukuba uMoses wathini xa abanye ababesenkampini yamaSirayeli baqalisa ukuprofeta. (Funda iNumeri 11:24-29.) UYoshuwa, owayencedisa uMoses, wayefuna ukubanqanda. Kucacile wayecinga ukuba bayamgqumelela uMoses kwaye negunya lakhe balenza lingabonakali. Kodwa uMoses wathi: “Unekhwele ngenxa yam na? Hayi, mna ndinqwenela ukuba bonke abantu bakaYehova bebengabaprofeti, kuba uYehova ebeya kubeka umoya wakhe kubo!” UMoses waqonda ukuba babesetyenziswa nguYehova. Engafuni ukuzibizela uzuko, uMoses wathi ebenqwenela ukuba bonke abakhonzi bakaYehova bafumane umoya wakhe. NjengoMoses, ngaba siyabavuyela abanye xa befumana amalungelo abenokunikwa thina?
11. Wathini omnye umzalwana ngokuthathwa kwembopheleleko yakhe ize inikwe omnye umzalwana?
11 Kukho abazalwana abebekhuthele kangangamashumi eminyaka abaye baqeqesha abanye abazalwana ukuze bathwale iimbopheleleko ezingakumbi. Ngokomzekelo, umzalwana ogama linguPeter uneminyaka engaphezu kwe-74 ekwinkonzo yexesha elizeleyo, eyi-35 kuyo ebekhonza kwiofisi yesebe eseYurophu. Usandul’ ukuyeka ukuba ngumveleli weSebe Lenkonzo. Ngoku umveleli welo sebe nguPaul, umzalwana ongaphantsi ngeminyaka kuPeter nosebenze naye kangangeminyaka. Xa uPeter wabuzwa ukuba ucinga ntoni ngokutshintshwa kwesabelo sakhe, waphendula wathi, “Ndivuya gqitha kuba kukho abazalwana abaqeqeshiweyo ukuze bakwazi ukuthwala iimbopheleleko ezingakumbi nabawenza kakuhle umsebenzi.”
12. Sifunda ntoni kwingxelo eseBhayibhileni engoRehobhoham?
12 Emva kokufa kukaSolomon, unyana wakhe, uRehobhoham, waba ngukumkani. Xa uRehobhoham wayefuna ukucetyiswa ngendlela yokulawula abantu, waqala kumadoda amakhulu. Kodwa waligatya icebiso lawo! Endaweni yoko, wasebenzisa icebiso awalifumana kubafana awayekhula nabo ngoku ababemnyamekela. Imiphumo yaba mibi. (2 Kron. 10:6-11, 19) Sifunda ntoni? Siya kuba sinobulumko xa sicela icebiso kubantu abadala nabanamava, size sicingisise ngalo. Nangona abantu abaselula bengafanele bazive benyanzelekile ukuba benze izinto ngeendlela zakudala, abafanele bangawahoyi amacebiso abantu abadala.
13. Abazalwana abaselula kufuneka basebenzisane njani nabazalwana abasele bekhulile?
13 Kusenokwenzeka ukuba abanye babazalwana abaselula ngoku bayakhokela kumsebenzi wentlangano oquka abazalwana abasele bekhulile. Nangona benaloo mbopheleleko, banokuncedwa bubulumko namava abazalwana abasele bekhulile ngaphambi kokuba benze izigqibo. UPaul ebesithethe ngaye, owangena ezihlangwini zikaPeter, wangumveleli wesebe laseBheteli, uthi, “Ndandiye ndicele amacebiso kuPeter, ibe ndandikhuthaza nabanye abakwisebe lethu ukuba benze okufanayo.”
14. Sifunda ntoni kwindlela uTimoti nompostile uPawulos ababesebenzisana kakuhle ngayo?
14 UTimoti, owayengumfana, wasebenza noPawulos kangangeminyaka. (Funda amaFilipi 2:20-22.) UPawulos wabhalela amaKorinte wathi: “Ndithuma uTimoti kuni, njengoko engumntwana wam oyintanda nothembekileyo eNkosini; yaye uya kunikhumbuza ngeendlela zam ezingoKristu Yesu, kanye njengoko ndifundisa kuyo yonk’ indawo emabandleni onke.” (1 Kor. 4:17) Loo mazwi abonisa ukuba uPawulos noTimoti babesebenzisana kakuhle. UPawulos wayeziphe ixesha lokufundisa uTimoti ‘ngeendlela zakhe ezingoKristu.’ NoTimoti wafunda kuye, nto leyo eyamenza wathandwa nguPawulos waza waqiniseka ukuba uTimoti wayeza kukwazi ukubafundisa abazalwana baseKorinte. Lo ngumzekelo omhle kubadala, abamele bawulandele xa beqeqesha amanye amadoda ukuze akwazi ukukhokela ibandla!
SONKE SINENDIMA YETHU
15. Icebiso likaPawulos eliya kumaKristu aseRoma lifanele lisincede njani xa izinto zitshintsha ibe zisichaphazela ngokungqalileyo?
15 Siphila kwixesha elibangela umdla. Inxalenye yentlangano kaYehova esemhlabeni ikhula ngazo zonke indlela, kodwa loo nto ibangela ukuba kubekho izinto ezitshintshwayo. Xa zisichaphazela ngokungqalileyo, ngamana singathobeka, size sifune kwenzeke ukuthanda kukaYehova hayi okwethu. Loo nto yenza kubekho umanyano. UPawulos wabhalela amaKristu aseRoma wathi: “Ndixelela wonk’ ubani apho phakathi kwenu ukuba angazicingeli ngaphezu koko amelwe kukuzicingela ngako; kodwa makacinge khon’ ukuze abe nengqondo ephilileyo, ngamnye njengoko uThixo amabele umlinganiselo wokholo. Kuba kanye njengokuba sinamalungu amaninzi emzimbeni omnye, kodwa la malungu akanamsebenzi ufanayo onke, ngoko nathi, nangona sibaninzi, singumzimba omnye ngokumanyene noKristu.”—Roma 12:3-5.
16. Yintoni enokwenziwa ngabazalwana abaneembopheleleko, ngabazalwana abaselula nangabafazi ukuze kubekho uxolo nomanyano kwintlangano kaYehova?
16 Nokuba iimeko zinjani, masisebenzele ekuhambiseleni phambili izinto zoBukumkani bukaYehova. Nina bazalwana abaneembopheleleko, qeqeshani abazalwana abangaphantsi kuni ngeminyaka ukuze benze le misebenzi niyenzayo. Nani bazalwana abaselula sanukuqhutywa ngemva, thobekani nize nibahlonele abazalwana abadala. Nani bafazi, xelisani umfazi ka-Akwila, uPrisila, owaqhubeka ehamba nomyeni wakhe yaye emxhasa naxa iimeko zabo zitshintsha.—IZe. 18:2.
17. UYesu wayebathembe entwenini abafundi bakhe, ibe wabaqeqeshela ukwenza ntoni?
17 Awukho umzekelo ogqwesa okaYesu wokuqeqesha abanye abantu ukuze bathwale iimbopheleleko ezingakumbi. Wayesazi ukuba laliza kuphela ixesha lakhe lokushumayela emhlabeni, ibe loo msebenzi kwakuza kufuneka wenziwe ngabanye abantu. Nangona abafundi bakhe babengafezekanga, wayebathembile yaye wabaxelela ukuba babeza kwenza imisebenzi emikhulu kuneyakhe. (Yoh. 14:12) Wabaqeqesha kakuhle kwaye bashumayela iindaba ezilungileyo kwindalo yonke ephantsi kwezulu.—Kol. 1:23.
18. Sinethemba lantoni, ibe yintoni esinokuyenza ngoku?
18 Emva kokuba uYesu efe njengedini, wavuselwa ezulwini waza wanikwa umsebenzi ongakumbi negunya “waba ngaphezulu lee kwabo bonke oorhulumente negunya namandla nobukhosi.” (Efe. 1:19-21) Ukuba sifa sithembekile ngaphambi kokuba ifike iArmagedon, siyazi ukuba siya kuvuselwa kwihlabathi elinobulungisa, apho kuya kube kukho umsebenzi omninzi owanelisayo. Okwangoku, kukho umsebenzi obaluleke kakhulu sonke esinokuwenza, ukushumayela iindaba ezilungileyo nokwenza abafundi. Ngamana sonke, abaselula nabadala, singaqhubeka ‘sinokuninzi kokwenza emsebenzini weNkosi.’—1 Kor. 15:58
KUTHENI KUNZIMA KWABANYE ABANTU UKUNIKISA NGEGUNYA?
Boyika ukuba abazukunconywa ngomsebenzi owenziweyo.
Kodwa ke, lonke uzuko lolukaYehova. —INdu. 115:1.
Abafuni kuyeka umsebenzi abawuthandayo.
Kodwa ke, unokuvuyiswa kukuqeqesha abanye abantu.—IZe. 20:35.
Boyika ukuba umsebenzi awuzukwenziwa kakuhle.
Kodwa ke, uThixo unokubanceda nabanye abantu bawenze kakuhle umsebenzi.—INdu. 37:5.
Bafuna ukusoloko bebambe iintambo.
Kodwa ke, nguYehova obambe iintambo.—Isa. 45:6, 7.
Bacinga ukuba abanalo ixesha lokuqeqesha abanye abantu.
Kodwa ke, ukuqeqesha abanye abantu kuya kubongela ixesha.—Efe. 5:15, 16.